Gomana rochiva amai: ‘Anondipindira mubhedhuru’ ‘Orara pamudhedha wangu’ ‘Pamwe pacho ondikikiritsa’ | Kwayedza
Gomana rochiva amai: ‘Anondipindira mubhedhuru’ ‘Orara pamudhedha wangu’ ‘Pamwe pacho ondikikiritsa’
03 Sep, 2020 - 12:09	 2020-09-03T12:13:29+00:00 2020-09-03T12:12:05+00:00 0 Views
MURUME wekwaMutare ane makore 32 okuberekwa ari kupomerwa mhosva yekuchiva amai vake vekumubereka zvekusvika pakuda kuvaita mudzimai sezvo achimbowanikwa “akatotyora” zvake pamubhedha wavo uye dzimwe nguva anorara achivagogodzera kuti vamuvhurire mumba mavo mavanenge vakavata.
Amai ava vave kutotyira kuti zviri kuitwa nemwanakomana wavo uyu anokwanisa kuzovabhinya kana kuvaponda sezvo aine nhoroondo yekupara mhosva achimbonopika jeri.
Future Matya (51) akadurura zviri pamwoyo pake kudare reMutare Civil Courts svondo rapera apo aitsvaga gwaro redziviro kubva kumwanakomana wake, Severino Mhosva.
Anoda zvakare kuti mwanakomana uyu adzingwe pamba sezvo achiti anomubira mari yake nekumurova.
Mhosva haana kuenda kudare musi uyu kuti anopawo divi rake pamberi pemutongi Muzvare Notebulgar Muchineripi.
Matya anoti Mhosva akatosvika pakumukikiritsa kakawanda achiedza kumuita mudzimai.
“Nguva zhinji, ndinopepuka ndichiona mwanakomana wangu ari pamubhedha pangu. Ndinotozoridza mhere kuti ndinunurwe nevavakidzani vangu,” anodaro.
Anoti nekuda kwaizvozvo, ave kutokiya gonhi remba yake yekurara nguva dzemanheru.
“Handisati ndambonzwa nezvemwanakomana anochiva amai vake vakamubereka. Anogogodza pamusiwo pangu husiku hwose, achikumbira kuti ndimuvhurire apinde. Handichazvikwanisi zvachose uye ndinoda kuti abve pamba pangu.
“Handisisina zororo pamba pangu. Ndakatenga sitendi iyi ndikatambudzika zvikuru nekuivaka mushure mekunge baba vake vafa asi iye zvino ave kuda kundidzinga pamba pangu,” anodaro Matya.
Anoti nguva yadarika, mwana wake akambomiswa mudare mushure mekunge amubaya nebanga.
“Anondityisidzira nebanga zvekuti ndakamumhan’arira kakawanda kumapurisa. Imbavha inozivikanwa zvikuru uye akabatwa nemhosva mumatare kakawanda.
“Mushure mekupikira mhosva dzake, anodzoka kumba oenderera mberi nehunhu hwake. Anoba kunyangwe mari yangu achiishandisa kutenga zvinodhaka.
“Tikaramba tichigara pamba pamwechete, ndinotya kuti nerimwe zuva achandiuraya,” anodaro Matya.
Muzvare Muchineripi akapa Matya gwaro rinomudzivirira uye ndokumupa zano rekuti anyorere kudare achikumbira kuti ridzinge mwanakomana wake pamba pake.
Matya akaudzwawo kuti amhan’arire Mhosva kumapurisa kana akazozama kuda kumubata chibharo zvakare.